HTC 10 သည်ယခုအခါတရားဝင် ၅.၂ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Snapdragon 5,2 | Androidsis ဖြင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်
HTC သည် HTC 10 ကို ၅.၂ လက်မအရွယ် QHD မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 5,2 ချစ်ပ်နှင့် RAM 820GB ဖြင့်ယူရို ၇၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်
Manuel Ramirez | | HTC က
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှမရောက်ရှိမီရောက်ရှိနေသည်။ HTC သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်အတွင်းမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိသောကြောင့်မဟုတ်ပါ သူတို့ပျံသန်းနိုင်မနိုင်ကြည့်ဖို့ အနည်းဆုံးအခြေခံများနှင့်ကိုက်ညီသောစမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြင့်ကောင်းကင်သို့တဖန်ပြန်သွားပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအမြင့်ဆုံးသို့မဟုတ်ထိပ်တန်းဖြစ်လိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်အခြား high-end ဖုန်းများနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်အမှန်တကယ် ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုမှဖယ်ရှားပေးသောဟန်းဒီးကပ်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီသည်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းယနေ့ခေတ် Android တွင်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပြီး၎င်းကိုလူသိနည်းသောကြောင့် HTC Hero နှင့်အခြားဆိပ်ကမ်းများမှသုံးစွဲသူများစွာကို ၀ ယ်ယူခဲ့သည်။
HTC က HTC 10. တရားဝင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ၅.၂ လက်မအရွယ် QHD (5,2 x 2560) Super LCD 1440 မျက်နှာပြင်နှင့်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတို့ပါ ၀ င်သည့်ဖုန်းနှင့် HTC A5 ကဲ့သို့တူညီသောအနေအထားတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျောက်မီးသွေးမီးခိုးရောင်၊ ရေခဲပြင်နှင့်ငွေအမြောက်အမြားတို့နှင့်ရွေးချယ်ရန်အရောင်သုံးမျိုးနှင့်သတ္တုကိုယ်ထည်တစ်ခုသည်၎င်းနှင့်ယူရန်ဖြစ်သည်။ HTC ၏ဒီဇိုင်းများအားလုံးအလုပ်လုပ်သည် အသစ်သောအာရုံကိုရောက်စေဖို့ဒီနှစ်အတွက်။ ၎င်းဖန်သားပြင်အပြင် Snapdragon 820 chip ကို၎င်း၏ Guts များတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဆားငန်သောမည်သည့် high-end ဖုန်းတွင်မဆိုမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ HTC ကဘာကိုကျွန်တော်တို့ကိုထပ်မံယူဆောင်လာသလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြစို့၊ အခြေခံအားဖြင့်ကိုက်ညီသောဖုန်းတစ်လုံးယူဆောင်လာခဲ့လျှင်၎င်းမှာများပြားလှသောစိတ် ၀ င်စားစရာများမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
2 ကင်မရာနှင့် Sense ဆော့ဖ်ဝဲအပေါ်အာရုံစူးစိုက်
3 HTC 10 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ယနေ့ခေတ်သတ္တုဒီဇိုင်းသည်ခြွင်းချက်အနည်းငယ်မှအပအဆင့်မြင့်အဆင့်တွင်အခြေခံသည် HTC သည်လွှမ်းမိုးထားသည့်ပုံစံကိုလိုက်နာခဲ့သည်။ ဒီတော့သူအာရုံစိုက်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ Sense layer နဲ့ကင်မရာပေးတဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ နောက်တစ်ခုက Android ကိုထုတ်လုပ်သူအများစုရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုရနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သတိထားမိပြီး Android ဖုန်းတစ်လုံးမှဓာတ်ပုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားသည်။
ဒီဇိုင်းသို့ပြန်သွားသောအခါ terminal တွင်ပေးထားသောဖြတ်တောက်မှုကြောင့်အနည်းငယ်ကွေးသောပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရှိသည် သာ။ ကြီးမြတ်နှစ်သိမ့်ပေးထားပါတယ် တ ဦး တည်းလက်၌ကိုင်ထားရန်ရှိသည်အခါ။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် volume ခလုတ်၊ SIM ကဒ်အထိုင်နှင့်ပါဝါခလုတ်တို့ပါရှိသည်။ မိုဘိုင်း၏အခြေခံအကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုလက်တစ်ချောင်းဖြင့်သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အတွက်မီးလျှံသည်တစ်နေရာတည်းတွင်တည်ရှိသည့် Xperia Z5 တွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာသည်ခလုတ်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်း၏အားနည်းချက်မှာအခြားဖုန်းများနှင့်ကပ်ထားလျှင်၎င်းသည်အနည်းငယ်ထူသောခံစားမှုကိုဖြစ်စေသည်။ သူတို့အားဖြင့်ချုံ့တစ် ဦး ခံစားချက် terminal ကိုဒီဇိုင်းအတွက်ကွေးနှစ်ဖက်ဒါပေမယ့်ဟေး၊ ဒါကအရသာပဲ။
ကင်မရာနှင့် Sense ဆော့ဖ်ဝဲအပေါ်အာရုံစူးစိုက်
ကင်မရာတွင် HTC 10 တွင်ရှိသည် အကျယ်ထောင့်နှင့် UltraPixel sensor နှင့်အတူ 12 MP နောက်ဘက် အတူတူ UltraPixel မှန်ဘီလူးများအတွက်ရှေ့ 5MP ပေါ်မှာ။ ကင်မရာနှစ်ခုစလုံးသည် OIS ဖြင့်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူသည်ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိလိုပါကအလွန်လျင်မြန်သောချဉ်းကပ်မှုနှင့် OIS ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအချို့ပြီးဆုံးသွားသောပုံနမူနာများထဲမှအချို့သောဓာတ်ပုံများသည်ပြည့်နှက်နေပြီးအရောင်များနှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
HTC 10 တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၏ကောင်းကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည် Google နှင့်အတူ Photos များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် ဇာတိအက်ပလီကေးရှင်းမှ RAW နှင့် Zoe ကဲ့သို့သောအမျိုးအစားများအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသည်။ DXOMark က၎င်းသည် Samsung Galaxy S7 နှင့်တူညီသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဖုန်းအတွက်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။
HTC Sense နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်aနှင့်အတူတီထွင်ခဲ့သည် Freestyle »ဟုအမည်ပေးထားသော layout အပြင်အဆင် သင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသင်လိုချင်သောအိုင်ကွန်များ၊ ဖြတ်လမ်းများနှင့်ဝစ်ဂျက်များကိုနေရာချနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ Android အတွေ့အကြုံကိုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်စေရန်အတွက် themes များတွင်ကိုယ်ပိုင်များလည်းရှိသည်။
HTC 10 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
၅.၂ လက်မဖန်သားပြင်ရှိသည့်ကွေးသော Gorilla Glass Super LCD 5,2 QHD (5 x 2560) 1440 ppi
Qualcomm Snapdragon 820 quad-core ချစ်ပ်သည် 2.2 GHz နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်
4 GB RAM မှတ်ဉာဏ်
Internal storage: microSD မှတစ်ဆင့် 32TB အထိ 64GB 2GB သိုလှောင်နိုင်သည်
f / 12 aperture နှင့် dual-tone LED OIS ပါ ၀ င်သော2MP Ultra Pixel နောက်ဘက်ကင်မရာ
၅ / MP ရှေ့ကင်မရာf/5aperture နှင့် OIS
အမြန် Chare 3.000 နှင့်အတူ 3.0 mAh ဘက်ထရီ
အန်းဒရွိုက် 6.0 Marshmallow
Dolby Audio နှင့်အတူ BoomSound Hi-Fi Edition ကို
ဆက်သွယ်မှု: Nano SIM၊ USB 3.1 Gen1 အမျိုးအစား C၊ Bluetooth 4.2၊ WiFi 802.11a/b/ g / n / ac (2.4 & 5GHz)
အရွယ်အစား: 145,9 x 71,9 x ကို9မီလီမီတာ
တိုတိုပြောရရင်၊ ရှုထောင့်အားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသော HTC မိုဘိုင်းအသစ် ပထမ ဦး ဆုံးအမှာသူတို့အားမြင့်မားသောအဆုံးတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဤနှစ်နှစ်ကာလအတွင်းသင်သည် Samsung၊ Huawei၊ Sony သို့မဟုတ် LG တို့ကိုငြီးငွေ့ပါက HTC ၁၀ ကိုစမ်းကြည့်ရမည့်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုစောင့်နေပြီးထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူသည် hardware ၌တွေ့မြင်ရသည့်အရာများနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကောင်းကျိုးရှိသည်။ စမတ်ဖုန်း နောက်တစ်ခုက HTC ကမြည်းကိုမဆင်းချင်သောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။
မေလအတွက်၎င်းကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချနိုင်ပြီးကြိုတင်မှာကြားထားနိုင်သည် ယူရို 799 ၏စျေးနှုန်းမှာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC သည် HTC 10 ကို ၅.၂ လက်မအရွယ် QHD မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 5,2 ချစ်ပ်နှင့် RAM 820GB ဖြင့်ယူရို ၇၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်
Chemஜ۩۞۩ * Chemita * ஜஜ۩۞۩ ဟုသူကပြောသည်
@htc @htc_es သူတို့သည်စျေးနှုန်းနှင့်အတူသစ်အယ်သီးများဖြစ်ကြသည်။ client သည်အနီရောင်နံပါတ်များကိုယူရမည်ဆိုပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။ သူတို့သန်းမရောင်းပါဘူး
to ۩۞۩ஜ * Chemita * ஜ۩۞۩ஜစာပြန်ရန်
စျေးနှုန်းကအရူးပဲ။ ဟုတ်တယ်ငါ HTC ကိုချစ်တာပဲ
အပြည့်အဝသဘောတူထားသည့်မိတ်ဆွေ၊ ထူးခြားချက်များရှိသော်လည်းအလွန်နောက်ကျ။ ဈေးကြီးမည်မဟုတ်။
Samsung Terminal တွင် Knock ON / OFF လုပ်နည်း
မည်သည့် Android တွင်မဆို Samsung Galaxy S7 Edge ၏ sidebar လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမည်သို့ခံစားရမည်နည်း